ဒါဟာအမေရိကန်မှာတစ်နှစ်တာရဲ့အကြီးမားဆုံးပစ်လွှတ်တဲ့နေ့မို့လက်တွေ့မှာတစ်ခုချင်းစီရဲ့စာရင်းအပြည့်အစုံပါ Lego ယနေ့သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသည်။
ဇွန်လ ၁ ရက်မှ စ၍ ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပအပါအ ၀ င်အခြားနယ်မြေများတွင်ဤအစုအခဲကောင်းများကိုရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်းအမေရိကန်ရှိလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏ရယ်သံများသည်ပြည်နယ်များရှိပရိသတ်များစောင့်ဆိုင်းနေသောဂိမ်းကိုကစားခိုင်းခဲ့သည်။ နွေရာသီ၏လှိုင်းများကဲ့သို့သင်၏သည်းခံမှုသည်ယခုနောက်ဆုံးတွင်ဆုလာဘ်ဖြစ်သည် Marvel, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ninjago, Minecraft နှင့်နောက်ထပ်အစုံများနောက်ဆုံးတွင်မှာယူနိုင်သည်။
အုပ်စုတစ်ခုစီ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်များကို link များနှင့်အတူအောက်ပါစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။ ထုတ်ကုန်လင့်ခ်တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် LEGO.comမရ။ သင်ဆက်သွားပြီး ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်လျှင်၎င်းအားကူညီပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မည် Brick Fanatics မင်းကဒီပြည့်စုံတဲ့စာရင်းတွေကိုယူလာတာနဲ့တူတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒါတွေအားလုံးကတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းပါ Lego CITY ယခုနွေရာသီတွင်တောရိုင်းအစုံလှိုင်းများကိုကျော်ဖြတ်ရန်ဆင်အသစ်များ၊ မျောက်များနှင့်ခြင်္သေ့များပါ ၀ င်သည်။ ထိုတိရစ္ဆာန်အချို့ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ ဒီမှာ.
60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း | ပြန်လည်သုံးသပ်
၎င်းသည်အခြားဘန်ပါသီးနှံဖြစ်သည် Creator 3-in-1 အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်များ၊ အစုံ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် - ၎င်းကို ထပ်မံ၍ ထပ်လောင်းဖော်ပြပါ Lego alt-build ဆောင်ပုဒ်သည်အဖွဲ့၏ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည် ၎င်း၏ retro လိုင်းများ၏အိမ်အသစ်.
Mickey Mouse နှင့်အဖွဲ့သည်ဤနွေရာသီတွင်ကွဲပြားမှုများစွာနှင့်အတူသင့်တော်သော minifigure စကေးကိုရရှိသည်။ classic Disney အက္ခရာများသည်ဤလှိုင်း ၄ ခုအစုံ၌ပျံ့နှံ့သွားသည်။
၁,၀၄၀ ကျပ်လျှင် ၁၉,၉၉ ဒေါ်လာသာရှိသည်။ ၏ 41935 အများကြီး DOTS ဒါကဒီမှာရွေးတာ။ တေးသွားအစုံ၏အမည်မှာကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing သာဖြစ်သည်။
ဤနွေရာသီ၏ခို ၀ င်ခြင်းကိုငြင်းဆန်သည် Friends မှော်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနှင့်တောတောင်အပန်းဖြေခရီးများမှသည်ကျောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်အမှတ်အသားအသစ်လှိုင်းလုံးများကိုတစ်ဖန်အစုံလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
အဆိုပါ Lego Group သည်ကောင်လေး wizard ၏နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Hogw ကိုပုံစံအသစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်arts၊ သီးသန့်ရွှေ minifigures များနှင့်စုဆောင်းနိုင်သော wizard ကဒ်များပါ ၀ င်သည်။
73693 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger | ပြန်လည်သုံးသပ်
73694 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် | ပြန်လည်သုံးသပ်
The Infinity Saga လှိုင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နှစ်လအကြာယနေ့အမေရိကန်စင်ပေါ်သို့ကျရောက်ခဲ့သည်။ Lego Marvel သို့သော်နောက်ပြန်လှည့်ရုံသာမက၊ ၎င်းသည်လည်းမျှော်လင့်နေသည်၊ တူသည် Disney+ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင် ...
၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet | ပြန်လည်သုံးသပ်
76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော | ပြန်လည်သုံးသပ်
အသစ်ငါးခု Minecraft ဒီအမြဲစိမ်းအပြင်အဆင်ဟာအနာဂတ်အတွက်ဘယ်မှမသွားဘူး၊ အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုရဲ့သဘာဝတူညီမှုကိုလက်ခံဖို့ blocky video game ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလှည့်စားဖို့အများကြီးပါ။
နင်ဂျာများသည်ဤနွေရာသီ၏ Seabound အစုံများအတွက် briny depths သို့ ဦး တည်နေသည်၊ ၎င်းတွင်ရေငုပ်သင်္ဘောအသစ်အသစ်ပါ ၀ င်သည်။ classic Destiny ရဲ့ Bounty
ဆောင်ပုဒ်သည် ၂၀၂၃ အထိယာယီရပ်နားရမည့်အကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် Lego အုပ်စုတွင်ပြောင်းရန်အစုံလိုက်လှိုင်းအပြည့်ရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဤ (အများစု) တွင်အမှန်တကယ်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံပါ ၀ င်သည်၊ ထို့ကြောင့်ငုပ်ရန်အကြောင်းများစွာရှိသည်။
43110 ရိုးရာနတ်သမီးပုံပြင် BeatBox | ပြန်လည်သုံးသပ်
43111 Candy ရဲတိုက်အဆင့် | ပြန်လည်သုံးသပ်
43113 K-Pawp ဖျော်ဖြေပွဲ | ပြန်လည်သုံးသပ်